Malleeshiyooyinka lagu dhaqan-celinayo Baydhabo oo Ciidammo laga dhigayo |
Malleeshiyooyinka lagu dhaqan-celinayo Baydhabo oo Ciidammo laga dhigayo
buy Silagra, acquire dapoxetine. Wasiirka hub-ka-dhigista & dhaqan-celinta maamulka Koonfur-galbeed Somalia, Xasan Xuseen Maxamed ayaa manta booqday xarunta dhaqan-celinta Baydhabo, halkaasoo ay ka socdaan tababaro kala duwan dadka ku jira oo tiradooda gaarayso 100-qof, kuwaasoo la dhaqan-toosinayo.
Mar uu wasiirku ka hadlayay hub-ka-dhigista iyo dhaqan-celinta malleeshiyooyinka ayuu sheegay in dhallinyarada hadda ay u socdaan tababarrada laga dhigi doono ciidammo ka tirsan maamulka Koonfur-galbeed, lagana warqabi doono.
Sidoo kale, magaalada Baydhabo waxaa dibadbax ka sameeyay gaadiidleyda ka shaqeysa Baydhabo iyo Muqdisho, iyagoo ka cabanaya isbaarooyin yaalla waddada u dhexeysa labadan magaalo oo ay maalin walba maraan.
Gaadiidleyda ayaa sheegay in deegaannada Leego iyo Ceelasha biyaha ay u yaallaan isbaarooyin kooxo ku labisan dharka ciidamada ayna ka qaataan lacago fara badan, qaarkoodna loo geysto jir-dil.
“Dumarka rakaabka ah ee saaran gaadiidka waxay kooxahaas kula kacaan mararka qaarkood kufsi,” ayuu yiri Yuusuf Aadan Marguus oo ka mid ah milkiilayaasha gaadiidka Baydhabo Muqdisho ka shaqeeya.
Maalintii shalay ahayd ayaanay jirin wax gaadiid ah oo ka baxay soona galay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Iyadoo tliyaha qaybta 60-aad ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Bay, Jen. Ibraahim Yaroow oo ka hadlayy cabashada gaadiidleyda ayaa sheegay inay jiraan dhibaatooyin loo geysto gaadiidleyda, ayna wax ka qaban doonaan.
“Taliyeyaasha ciidamada ku sugan aagagga dhibaatada laga soo sheegayo haddii ay wax ka qaban waayaan inay baabi’in doonaan ciidamada halkaas isbaarooyinka dhigtay si ay shacabka ugu dhibaateeyaan,” ayuu yiri Jen. Yaroow.
Ugu dambeyn, waxaa isla arrintan ka hadlay mas’uuliyiinta Koonfur-galbeed oo uu ka mid yahay wasiirka hub ka dhigista, isagoo sheegay inay shacabka ka difaacaan kuwa xumaanta ku sameynaya, ayna sugi doonaa ammaanka deegaannada uu maamulkoodu ka taliyo.